Lafta Gareen "Meel aan u noqdo ma jirto hadii aan lacag iyo xal loo helin dhibka i heysta" - Muqdisho Online
Home Wararka Lafta Gareen “Meel aan u noqdo ma jirto hadii aan lacag iyo...
Lafta Gareen “Meel aan u noqdo ma jirto hadii aan lacag iyo xal loo helin dhibka i heysta”
Waxaa asbuucyadii la soo dhaafay ku sugnaa magalaada Muqdisho Cabdicasiis Lafta Gareen oo u yimid in uu lacag ka soo qaato Ninkii isaga ka dhigay Madaxweynaha, MW Farmaajo.
Mid ka mida Wasiirada ayaa u sheegay MOL in ay maamulkii Koonfur Galbeed dhintay. Waxa lagu hayo Baydhabo ayan jirin. Waxa uu yiri “waxa kaliya ee lagu joogo degaanka Baydhabo waa dadka reer Baydhabo oo nabadooda iyaga ilaashada iyo ciidanka Itoobiyaanka ee ku sugan magalada Baydhbo.
Previous articleXuutiyiinta Yaman oo heshiis lagelaya Dowlada Mareyakanka
Next articleDhakhaatiir u dhashay kuba oo Xalad amaan daro looga saaray Dalka kenya